मुस्ताङमा पर्यटकीय चहलपहल सुरु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४ मा प्रकाशित !
४ चैत, बागलुङ।पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै मुस्ताङ छिर्ने पर्यटकको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो छ । फागुन–जेठ दोस्रो मुख्य पर्यटकीय याम हो । मध्यजाडोमा हिमपातसँगै अत्यधिक चिसो झेलेको मुस्ताङले अहिले न्यानोसहित पर्यटकलाई स्वागत गरिरहेको छ ।
पुस–माघमा एकाध पर्यटक देखिने मुस्ताङका गन्तव्यमा अहिले बाक्लै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक देखिन्छन । फागुन लागेसँगै पर्यटक आगमन बढेको मुस्ताङका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी बताउँछन । जोमसोमका होटल व्यवसायी अनिता शेरचनले बास बस्ने पर्यटकको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको बताए ।
“पर्यटक नआउँदा सुनसान बनेका होटलमा चहलपहल सुरु भएको छ,” उनले भने । हिउँ पर्ने र बढी चिसो हुने हुँदा पुस माघमा पर्यटक आगमन अति न्यून हुने गरेको छ । पर्यटक आगमन सुरु भएपछि मुस्ताङका व्यवसायी उत्साहित बनेका छन । पछिल्लो समय त्यहाँ घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । अघिल्ला वर्षका तुलनामा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको लेतेस्थित ‘एन्जल गेष्ट हाउस’का सञ्चालक विमल शेरचनले बताए ।
मुक्तिनाथ जाने विदेशी पर्यटकमा सबैभन्दा बढी भारतीय रहेको सूचना केन्द्रका कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद गुरुङले बताए । मुस्ताङ भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटकको लेखाजोखा राख्ने गरिएको छैन । यहाँ जनवरीमा कुल ६२७ विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका थिए । फ्रेब्रुअरीमा एक हजार २३२ विदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका छन ।
भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारण गत वर्ष खस्किएको पर्यटन व्यवसाय पुनः फस्टाउने आशा जागेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन । यातायातको सहजताले पछिल्लो समय मुस्ताङ घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । ‘एक्याप’ मुस्ताङका अनुसार गत वर्ष कुल ३९ हजार १७ विदेशी पर्यटकले मुस्ताङको भ्रमण गरेका थिए ।
PREVIOUS POST Previous post: ट्रकको ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना
NEXT POST Next post: ४८१ गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाईयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ११:०४